Shirkada Turkish Airline oo Hargaysa u Wareegtay Iyo Juba Airways oo Muqdisho uga Qaadaysa Dadka + Heshiiska ay la Saxeedeen Somaliland - iftineducation.com
Shirkada Turkish Airline oo Hargaysa u Wareegtay Iyo Juba Airways oo Muqdisho uga Qaadaysa Dadka + Heshiiska ay la Saxeedeen Somaliland
aadan21 / February 10, 2016
iftineducation.com – Wasiirka duulista hawada Iyo gaadiidka cirka Cismaan Cabdulaahi Saxaradiid (Cadaani) oo xafiiskiisa ku qaabilay wafti ka socda shirikada diyaaradaha ee Turkish Airline.
Waftigan oo ahaa sahan indho indhayn ah ayaa noqonayaa mas’uuliyiintii ugu horaysay ee ka socda shirikadaas ee yimaada caasimada Somaliland ee Hargaysa.
Kulankan waxaa wasiirka
ku weheliyey agaasimaha guud ee wasaaradda duulista Somaliland Cumer Cabdulahi Aadan, Agaasimaha waaxda duulimadyada Siciid Mahadi Ileeye (Saqiiro), maamulaha madaarka Maxamed Yuusuf Ismaaciil.
Dhinaca kale waftiga shirikada Turkish Airlane, waxaa hogaaminayey qunsul ku xigeenka xafiiskooda ee Hargaysa, laba khabiir oo duulimaadyada ah.
Kulankaan ayaa markii uu dhamaadey waxaa ka warbixiyey wasiirka duulista oo yiri:
“waxaa halkan noogu yimi shirkada Turkish Airlines, waxaanay runtii danaynayaan inay ka mid noqdaan diyaaradaha yimaada Somaliland, gaar ahaan madaarkan Hargeiysa ee Egal International Airport ,waanu wada hadalnay waxaanu isla garanay inaanu siino wax alla iyo wixii macluumaad ah ee madaarku leeyahay ee ay u baahan yihiin, iyagana aanu ogaano waxay ka rabaan Somaliland.”
“inaanu anaguna markaa ka fekerno anagoo eegayna waxay dalka ku soo kordhinayaan, haday maalgalin tahay Madaarada, iyo haday tahay xaga shaqaalaha wasaaradaba, inaanu siino fasaxii ay ku imanayeen Egal International Airport.” ayuu yiri wasiirku isagoo hadalkiisa sii wata.
Galamada buraashida waa qaabkee
Warbixin sirdoon ah: Ninkii fududeeyay qaraxii daallo, beeshiisa & dadkii uu horay u shirqoolay